Kulesi sihloko sizoxoxa iphutha ezivamile ukuthi Wabasaqalayo in commercial nomklamo wewebhu kanye umklamo isayithi. Abasakwazi eziningi, kodwa lesi sihloko sikhuluma kuphela amaphutha ezinkulu ezintathu.
 iphutha lokuqala. Uzotshala (sindisa) ihluzo. Njalo umthuthukisi we isayithi commercial noma umklami web ofuna lokho yakhe isisetshenziswa web zhivim lalibonakala liqhakazile kakhulu, esimnandi enhle. Ukuze kuzuzwe lokhu, Wabasaqalayo abaningi bathambekele ukusebenzisa eningi ihluzo (ihluzo), ikakhulukazi izithombe. Lokhu ke luwumgogodla inkinga ngokuvamile isamba okunjalo enkulu izithombe, futhi lokhu ivolumu siyehla ukulayisha ikhasi esizindeni Web. Ngokuvamile, abasebenzisi bezikhali Inethiwekhi yomhlabajikelele isineke kakhulu, futhi cishe ngeke ulinde kuze kube yilapho ikhasi ebhuthini kusayithi lakho, baya kangcono naye, futhi ngeke lehle komunye, kubelula futhi kusebenze kahle. Ngokushesha esingakunikela iseluleko ukuze ugweme lokhu iphutha elivamile - Kungenzeka ukusebenzisa Ukubala. I-GIF format kuka-JPEG, ngoba has a umthamo ezincane.
 I yesibili iphutha. Ngokweqile amabhanela ekhasini lakho. Kungcono ukunciphisa esincane kakhulu isibalo amabhanela ukuboniswa ekhasini lakho. Nalapha siphendukela iphutha lokuqala - amabhanela - lawa ihluzo efanayo, ezinesisindo kakhulu, futhi ngakho-ke kuvela ukuthi ziphazamise ukusebenza kusayithi lakho. Enye Ububi izibhengezo, isikhathi esungulwe - wukuthi muva nje amabhanela - lokhu ukukhangisa, okuyinto ilahlekelwe ukusebenza yayo yangaphambili. abasebenzisi Modern uwathole izithombe into engenamsebenzi ikakhulukazi bona akukude. Ngako-ke abasebabili into cishe engenamsebenzi.
 Iphutha lwesithathu. "Iziphazamiso Eziningi" yezimanga. Okuqukethwe okuqukethwe kusayithi kumele ethile ulwazi lwesistimu, kunokuba iqoqo buthuntu. Lolu hlelo kufanele aqoke bese utshela umsebenzisi ukuvakashela indawo yakho mayelana nezenzo ukuthi idinga ukufeza. Indima ebaluleke kunazo zonke leli phutha kudlalwa kumasayithi kuwebhu kwezohwebo. Qiniseka ngaphambi kokuqala ukuthuthukisa website yakho siqu udinga ukuba sicabange ngokucophelela ngokusebenzisa isakhiwo sonke isayithi. Kuyinto engenakwenzeka noma kunjalo ukwenza ikhasi lakho abanye noma izithombe amabhanela. Akukwazi ngokungacabangi ukuhlela okuqukethwe Imininingwane kusayithi.
Konke lokhu amaphutha kubalulekile ukubeka eceleni ukuthuthukiswa web yayo isisetshenziswa kwezohwebo.
Umbala contact lens FreshLook ColorBlends: izibuyekezo, izithombe
Anime "Blue Ukusebenzela uZimu": izinhlamvu. "Blue Ukusebenzela uZimu": izithombe, amagama abalingiswa abasemqoka